पब्जी गेम कसरी सुरु भएको थियो ? पब्जी हिस्ट्री ! हरेक दिन २ करोडले.... - Samasta Khabar
सन् १९५८ अक्टोबर महिनामा भिडियो गेमको सुरुवात भएको थियो । त्यो पहिलो भिडियो गेमको नाम भने पन्जी थियो ।
अहिले निकै नै चर्चा बटुलेको भिडियो गेम हो पब्जी । पब्जी को पूरा रुप Player Unknown’s Battle Grounds हो । यो गेम विश्वमा हरेक दिन करिब २ करोड भन्दा बढी व्यक्तिले खेल्ने गर्दछन् । यस खेल खेल्नको लागि मोबाइलमा करिब २ जिबी र्याम चाहिन्छ भने अनिवार्य इन्टरनेट चाहिन्छ ।
पब्जीलाई दक्षिण कोरियाको कम्पनीको सहायक कम्पनी पब्जी कर्पोरेशनले बनाएको हो । पब्जी गेमका लिड डिजाइनर र डाइरेक्टर ब्रेन्डन ग्रिन हुन् । उनी पब्जीका लिड डिजाइनर र डाइरेक्टर हुन् ।
ब्रेन्डन आइरल्याण्डका नागरिक हुन् । कामको शिलशिलामा उनी ब्राजिलमा बस्थे । उनी फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर र वेब डिजाइनर थिए । भिडियो गेमका सोखिन थिए ब्रेन्डन । उनी DayZ भिडियो गेम खेल्दथे । उनी निकै नै प्रभावित भएको फिल्म Battle Royal र DayZ गेम अनि उनले सोचे आफू पनि त्यस्तै गेम बनाउने । गेम उद्योगमा छिर्नका लागि उनले सिके । त्यसपश्चात् उनले विभिन्न गेममा भएका कमजोरीहरु खोजेर परिवर्तन गरे ।
उनको गेमप्रति यस्तो बनाउने सोच थियो ताकि उनले निर्माण गरेको भिडियो गेम जसलाई जति पटक पनि खेलिरहन मन लागोस् । उनी सोनी अनलाइन इन्टरमेन्टमा H1Z1 गेमको कन्सल्टेन्टका रुपमा सामेल भए । त्यसपश्चात् उनले त्यो कम्पनी छोडे । उनले कोरियामा आफू जस्तै गेमको सोच बनाएका चांग हान किमलाई भेटे । किमले ब्रान्डनलाई कोरिया बोलाएर आफ्नो कन्सेप्ट बताए । उनीहरुले पब्जी गेम मिलेर बनाउने सोच्न थाले । उनीहरुले यो गेम १ वर्षमा बनाउने सोेचे । त्यसपश्चात् ७० गेमडेभलपर राखेर गेम बनाउन सुरु गरे ।
मार्च २०१७ मा पब्जीको बेटा भर्जन सुरु गरे । २० डिसेम्बर २०१७ मा पब्जी सार्वजनिक भयो । पब्जी सार्वजनिक भएको ३ दिनभित्रमा ११ मिलियन डलर कमाइ भइसकेको थियो भने ४ हप्ताभित्रै १ करोड राउन्ड खेलिसकिएको थियो ।
निकै महत्वपूर्ण खेलमा बार्साको भिडन्त रियलसँग !
27th February 2019 avigo 0
१७ वर्षपश्चात् अनिल कपुर र माधुरी दीक्षितको जोडी चलचित्र टोटल धमालपछि चर्चामा आएको छ । धमाल...
9th February 2019 avigo 0
हिमाली क्षेत्र र उच्च पहाडहरुमा दुई दिनदेखि हिउँ परेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँले जनजीवन पूर्ण...
16th January 2019 avigo 0
बलिउडमा केही समय मि टु निकै नै भाइरल रह्यो । यससँगै अब्बल निर्देशक हिरानी पनि आरोपित...